Elysée: wajiga cusub ee hoolka tuulada - TELES RELAY
ACCUEIL » kale • Uncategorized »Elysée: wajiga cusub ee hoolka xaflada
Elysée: wajiga cusub ee hoolka xaflada
Hoolka tuulada ee Elysée wuxuu u gudubaa casaan ilaa cawl
Laga soo bilaabo 1889 World Expo, hoolka tuulada ayaa dib ugu noqda madaxweynaha Sadi Carnot. Ku dhawaad ​​hal qarni ka dib, 1972, Georges Pompidou waxay leedahay yaab aan fiicnayn oo lagu ogaanayo dillaacan ka soo baxa koofiyaddan. Kiraystaha Élysée ayaa go'aaminaya inuu bilaabo shaqada. Dhamaantood lama dhameeyo sababtoo ah waa la waayay.
Laba shuruud ka dib, François Mitterrand ayaa xannaaneyneysa. In 1984, Socialist ugu horeysay si ay u degaan ee 55, Faubourg Saint-Honoré Street wareemay toban daaqadaha Faransiis iyo saqafka galaas on beerta qaboobaha deriska ah si aynu iftiinka ku. Tan iyo markaas, madaxweynuhu ma hirgelin dayactirka darbigaan. Iskusoo wada duuboo, midna ma dhicin in la baddalo midabada cas iyo midabka dahabka.
in lacag dhowr midabo cawl buluug ah, oo dhan midabo cad hadda siin Hufnaan iyo dhalaalka eegno at qolka this: Macron in 2019, hal sano ka dib markii la jaray cake, ma wax kasta oo ka soo cas u noqon oo Bula- kuwaas oo marti gelinaya Khamiistii 25 April 2019, hadalka madaxweynaha ee shir saxaafadeed oo lagu soo bandhigay 320 Faransiiska iyo wariyeyaasha shisheeye.
Xaqiiqda dhabta ah ee suurtagalka ah ee qolkan oo qarniyaalku ahaa munaasabadda dhacdooyinka weyn ee Elysée.
Waxbarashada Cameroon: Machadka Machadka Teknolojiyada Douala wuxuu u sareeyaa machadka ugu sareeya
Kulanka Golaha Degaanka: Dawladdu waxay ka wada xaajootaa xeeladaha lagu joojinayo sicirka isgaarsiinta